Kugadzira Yakanakisa Kushambadzira Sangano. | Martech Zone
Mukutaurirana neshamwari yangu uye wandaishanda naye Joe Chernov, VP Kushambadzira kuKinvey tanga tichichinjana mimwe yemibvunzo yakabvunzwa isu tese takagamuchira mukati mezvikwata zvedu uye kubva kune vezera muindastiri. NaJoe ari iye zvemukati mushambadzi wegore haungashamiswe kuziva kuti mumwe wemibvunzo yake inobvunzwa ndewe:
Ini ndinotanga sei yakabudirira zvemukati yekutengesa chirongwa?
Mubvunzo wechipiri waakabvunzwa kazhinji ndewekuti:
Iwe unogadzira sei yako timu yekutengesa?
Kuvhundutsa? Pamwe kwete.
Sezvo ini ndakabvunza ndakatenderedza kune vandaishanda navo zvakava pachena kuti chiitiko chaJoe hachisi chakashata. Muchokwadi, zviitiko zvangu zvehupenyu zvakafanana nezvake uye pandakatanga kuita tsvakiridzo yakajeka kuti chimiro chakaringana chesangano yeboka rako rekushambadzira inyaya inopisa. Startups inoda kuvaka rakabudirira timu uye makuru masangano anoda kukwidziridza yavo. Izvo zvaityisa ndezvekuti hapana rakakura boka rezvinhu zvirimo zvinotsigira uyu musoro.
Mumakore akati wandei apfuura ndakaita rombo rakanaka kutungamira masangano ekushambadzira emabhizimusi uye epakati-pamusika mabhizinesi. Ndanga ndiri chikamu chekuvaka zvikwata kubva pakutanga pane kutanga senge Ita (ikozvino chikamu cheOracle) uye kugadzirisa pamwe nezvikwata ku Webtrends Saka zvino Mindjet. Pakati peino nguva ndakagadzira bhuku rekutamba iro rinogona kuyera kusvika pahukuru hwese hwebhizinesi, rinochinja zvakanyanya, uye rine rekodhi rekodhi yekubudirira. Pazasi pebhuku rangu rekutamba uye ndinotarisira kuti rinotanga hurukuro kana kumutsa pfungwa yechikwata chako.
Chinhu chimwe ndechechokwadi. Chiyero chekukanganisa uye shanduko chiri kuzowedzera mukushambadzira. Ini ndinofunga rako rekushambadzira sangano rinofanirwa kutsigira kugona kuchinjira kune izvo shanduko uye kubudirira. Ndinoda mhinduro yako pamabatiro atingaite bhuku iri rekutamba zvirinani.
Tags: dhipatimendi rekushambadzirakushambadzira sanganomamiriro ekushambadziraSanganoKurongeka Kwesangano